Buuq ka dhashay filim ku saabsan xasuuqii masaajidka Christchurch ee dalka New Zealand – Calanka.com
Buuq ka dhashay filim ku saabsan xasuuqii masaajidka Christchurch ee dalka New Zealand
Gabadhii soo saaraha ka aheyd filim ku saabsanaa weerarkii argagixisada ahaa ee lagu qaaday masaajidka ku yaallay Christchurch ee dalka New Zealand ayaa ka laabatay soo saaristiisa ka dib markii uu dhaleeceen xooggan uu kala kulmay filimka.
Filimka lagu howlanaa soo saaristiisa ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro kaalinta Ra’iisul wasaaraha New Zealand, Jacinda Ardern, ay ka qaadatay ka jawaabcelinta weerarkii lagu qaaday masaajidda sannadkii 2019-kii, gaar ahaan khudbad ay jeedisay.
“Waxaan dhageystay walaaca dhawaan laga muujiyay filimka, waxaan dhageystay muhiimadda ay xambaarsaneyd aragtida dadweynaha,” ayay tiri Philippa Campbell.
“Haatan waxaan aqbalay in filimka ku saabsan weerarkii 15-kii bishii March 2019 uu ahaa mid ceyriin oo aanan dhameystirneyn, sidaas darteed, aniga ma doonayo in aan ku lug lahaado mashruuc abuuri karo jahwareer”.
Dhaleeceynta Ra’iisul Wasaaraha ee filimka
“Inkasta oo ay jiraan sheekooyin badan oo filimka lagu sheegi karo, markaa ma qabo in sheekadeyda ay kamid noqoto filimka”, ayay tiri Jacinda Ardern oo ah Ra’iisul Wasaaraha New Zealand.
Jacinda Ardern waxaa si weyn loogu amaanay qaabkii ay ula tacaashay weerarkii iyo khudbaddii ay jeedisay.
Waxaana lasoo jeediyay in filimka lagu bilaabo khubaddii ay jeedisay markii uu weerarka dhacay.
Waxay ku baaqeen in filimka uu yahay mid hal dhinac ah, “Dhibanayaashii iyo dadkii ka badbaaday weerarka ayay aheyd in diiradda lagu saaro intii lagu soo bandhigi lahaa jawaab ay ka bixisay haweeney caddaa ah”.
“Waxaan aad uga carooday in weli ay ka fakarayaan in arrintani ay tahay arrin habboon” , ayay tiri Lianne Dalziel oo la hadleysay warbaahinta RNZ.